Home News Dowladda Mareykanka oo kordhisay duqeymaha ay la beegsaneyso Saldhigyada Ururka Al Shabaab
Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa muddooyinkii dambe sare u qaaday weerarrada xagga cirka ee ay ku bartilmaameedaadaan fariisimaha Al Shabaab ay ku leeyihiin Soomaaliya.
Diyaarado dagaal ayaa xalay mar kale duqeymo ku bartilmaameedsaday xeryo ay Al Shabaab ku leeyihiin deegaanno ka tirsan degmada Xaradheere ee gobolka Mudug.
Dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in ay maqlayeen madaafiic dhowr ah oo lala dhacay meelo la rumeysan yahay in ay ku suganyihiin Al Shabaab, iyadoo aan wali la xaqiijinin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkan ugu dambeeyay.
Shalay ayey taliska Ciidamada Mareykanka ee Afrika sheegeen in ay 37 xubnood oo ka tirsan Al Shabaab ku dileen duqeymo darraad lala beegsaday isla fariisimahan xalay la weeraray.
Bishii Maarso ee sannadkii 2017-kii, ayuu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump amar ku bixiyay in la xoojiyo weerarrada deg degga ah ee lala beegsado Al Shabaab, si gacan loo siiyo ciidamada dowladda Soomaaliya ee dagaalka kula jira Shabaab.
Sidoo kale mas’uuliyiinta Mareykanka ayaa hadda ku doodaya in howlgalladoodu aysan waxyeello ka soo gaarin dad rayid ah.
Previous articleXildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulan ay yeesheen uga dooday arrimo xasaasi ah
Next articleDowladda Soomaaliya oo sheegtay in Ciidamada Amniga ay dileen sarkiil ka tirsan Ururka Al Shabaab
Maxaa kusoo kordhay ninkii Ajnabiga ahaa ee Garoonka Aadan Cadde lagu...